Guryo iyo villayo leh barkad, kiro iyo iib ah jasiiradda Ibiza.
Villas ku yaal Ibiza | Guryo iyo villayo leh barkad kiro iyo iib ah oo ku yaal jasiiradda Ibiza.
Ku noolow khibradda Ibiza
Ku noolow khibrad Ibiza ah
Raadi jeexitaankaaga janno ee ka mid ah xulashadayada villa ee Ibiza
icon / laba-chevron-hoosLa abuuray Sketch.
Ka fiirso ururkeena quruxda badan ee Villas kirada
Guryaha kirada ah ee Ibiza
Waxaan u heellannahay inaan helno hoygaaga fasaxa ah ee habboon ee Ibiza.
Ka dooro xulashadeena filooyinka raaxada leh barkad ama fincas caadi ah oo leh naf, mid kasta oo ka mid ah tuulooyinka ku yaal faylalkayaga ayaa si taxaddar leh loo xushay waxayna bixiyaan nooc kasta oo raaxo leh.
Guri yar oo aad u yar oo ku yaal Ibiza oo leh barkad leh
Gurigan aadka u wanaagsan ee aadka u yar ayaa leh lebis aad u fiican iyo qaybsi qurux badan. Hoolka laga soo galo waxaa ku yaal qolka fadhiga qorshe furan, oo leh jiko furan. Guriga oo ...
Add to Favorites Ka saar waxyaabaha aad ugu Jeceshahay
Villa raaxo leh oo ku yaal Ibiza oo leh aragtiyo qurux badan
Guri qurux badan oo ku yaal buur ku taal aagga la deggan yahay ee Sa Carroca oo ku raaxeysata wadarta asturnaanta, amniga iyo xasilloonida. Waxay ka tirsan tahay kaniisadda San Jose, kaliya 10 daqiiqo oo laga bilaabo Ibiza tow ...
Villa ku taal Ibiza oo ku qarsoon kaynta
Villa waxay u qaybsan tahay afar qol jiif iyo hal. Waxa kale oo jira guriga martida ee dhagaxan-dhagxaanta leh oo lagu qurxiyay sharaf iyo hammuun ay u qabaan martidaas lama filaanka ah ee u soo baxday is biirsaday iyo ...
Villa naqshadeynta raaxada leh heerar dhowr ah iyo aragtiyo qurux badan oo badda ah
Naqshadeynta villa oo leh heerar kala duwan iyo aragtiyo qurux badan oo badda ah, oo dhan 750m2 oo laga dhisay 2100m2 oo dhul ah. Waxay ku taal xeebta waqooyi ee jasiiradda. Qolka cuntada Jiko si buuxda u qalabeysan, 4 qaboojiyeyaal, dhaqid ...
Ama daalaco aruurinta oo dhan
Ibiza, Jasiiradda cad
Xeebo qurux badan oo leh biyo turquoise iyo buuro dhaadheer, tuulooyin qurux badan, gastronomy aad u macaan iyo qaar ka mid ah naadiyada ugu caansan adduunka. Ibiza waa tan oo dhan iyo wax ka badan. Hiddeheeda dhaqameed ee ka dhashay is-weydaarsiga dhaqammada kala duwan ee ka kooban taariikhdeeda, Punic, Roman, Phoenician… ayaa jasiiraddan yar ee Mediterranean-ka u rogtay tixraac adduun.
Marka maxaad ugu raaxeysaneysaa Ibiza kaliya inta lagu jiro xagaaga? Hadday tahay Kirismas, Toddobaadka Ista ama wakhti kale oo sannadka ka mid ah, qoysasku waxay ku raaxeysan karaan waxqabadyo badan oo xagga badda ah taas oo ay ugu wacan tahay jawiga deggan iyo maalmaha qorraxdu badan tahay.
Haddii aad u baahan tahay talo ku saabsan halka aad joogayso, buuxi foomka ama wac.
Waan ku farxi doonnaa inaan kaa caawino inaad hesho villa hagaagsan oo aad soo ogaato Ibiza dhab ah.
Ku soo biir our Newsletter
Dhismaha guryaha ee Ibiza
In kasta oo ay caan ku ahayd cawayska habeenkii iyo meelaha casriga ah, Ibiza aad ayey uga badan tahay xeebaha iyo naadiyada. Jasiiraddu waxay bixisaa meelo sixir iyo cajaa'ib leh, bey'ad aan la nijaasayn iyo nolol tayo sare leh dhawr saacadood oo duulimaad ah oo laga raaco meel kasta oo Yurub ah.
Ibiza waa meesha ugu fiican ee guri lagu yeelan karo.
Eeg liistadayada villa-yada iibka ah, guryaha, iyo mashaariicda horumarinta dhulka ee Ibiza
Dhul iib ah Ibiza oo leh mashruuc
Weydiinta qiimaha 550.000 €
Guri raaxo leh oo iib ah Ibiza Botafoch
Weydiinta qiimaha 1.200.000 €
Penthouse iib ah Ibiza - Marina Botafoch
Weydiinta qiimaha 1.590.000 €
Villa iib ah Ibiza, waqooyiga jasiiradda
Weydiinta qiimaha 1.399.000 €
Xaddidaadaha jasiiradda Ibiza sababo la xiriira fiditaanka-19 faafa.
Cusbooneysii 30 Nov 2021 Maxaan u baahanahay si aan ugu safro Jasiiradaha Balearic? Rakaabka qaranka iyo kuwa caalamiga ahi maaha inay gudbaan wax hubin caafimaad ah. Sababo la xiriira
Fasaxyada Yacht ee Ibiza
Axdi superyacht oo ku yaal jasiiradaha Balearic ayaa ah fursadda ugu fiican ee qaar lagu soo maro
Xaaladda Covid 19 - Coronavirus ee Ibiza, Jasiiradaha Balearic, Spain
16 Nof 2021 Waqtigan xaadirka ah Ibiza iyo Formentera waxaa jira 266 qof
Dhawaan ayaa la furayaa goobaha lagu caweeyo ee Ibiza.
Xayiraadaha Ibiza iyo Formentera ee uu sababay coronavirus covid-19 waa la qaaday sida
Smart Working gudaha Ibiza
Tan iyo markii uu bilaabmay cudurka faafa ee coronavirus covid-19, dad badan ayaa la qabsaday
Axdi superyacht oo ku yaal jasiiradaha Balearic ayaa ah fursadda ugu fiican ee lagu soo maro qaar ka mid ah meelaha ugu quruxda badan badda dhexdeeda. Iyo kiraynta doonyaha markabka
16 Nof 2021 Waqtigan xaadirka ah Ibiza iyo Formentera waxaa jira 266 qof oo uu ku dhacay cudurka 'coronavirus' covid-19. Tani waa tirada ugu badan ee kiisaska firfircoon ee fayraska
Xayiraadaha ku yaal Ibiza iyo Formentera sababtuna tahay covid-19 covid-XNUMX ayaa la qaaday iyadoo xaaladda cudurrada faafa ee Jasiiradaha Balearic ay soo hagaageyso. Naadiyada Ibiza ayaa awoodi doona inay furaan
Tan iyo markii uu bilaabmay cudurka faafa ee coronavirus covid-19, dad badan ayaa caadaystay inay ka shaqeeyaan guryahooda halka kala fogeynta bulshada ay wali socoto oo wadamo badan ayaa leh
Kireynta muddada-dheer ee Ibiza
In kasta oo boqolaal reer Yurub ahi ay mudaharaadyo ka dhigayaan jidadkooda iyaga oo ka soo horjeedda dawladahooda xayiraadaha la soo saaray, ee mar labaad ku xidha guryahooda iyadoo ay suurtogal tahay in la tago
Villa Raaxo Gaar ah Oo Ku Yaal Ibiza Oo Ku Wajahan Badda
Fantastic Minimalist Style Villa ee Ibiza
Si qurux badan oo casri ah oo casri ah Villa ee Ibiza
Villa Casri ah Ibiza
Waxba kama garaacaan aqoonteenna dhabta ah ee deegaanka Ibiza.
Nala soo wac si aad u hesho caawimaad, qiimaha ugu fiican iyo adeegga gogosha.
Villas ku yaal Ibiza | Guryo iyo villayo leh barkad, kiro iyo iib ah jasiiradda Ibiza.
Xulashada guryaha villa ee kirada ah
Uruurinta buuxda >>
Villa qurux badan oo ku taal Ibiza oo leh aragtiyo badda dhinac kasta oo guriga ah
Laga bilaabo 1.200 € / maalin
Guryo casri ah oo qurux badan oo ku yaal Ibiza oo u dhow koonfurta Jasiiradda
Guri aad u qurux badan oo deyr leh oo ku yaal Ibiza oo leh aragtiyo badda oo cajiib ah
Dhismo qurux badan oo kiro ah oo loo yaqaan Ibiza oo la kireystay oo leh aragtiyo qurux badan
Laga bilaabo 2.000 € / maalin
Blog, Magazine, talooyin ku saabsan Ibiza
Jariidad Buuxda >>
Dhibaato ayaa lagu ogaaday foomkan. Soo gudbintu waxay keeni kartaa khaladaad. Fadlan la xidhiidh maamulaha goobta.
Waxaan rabaa inaan qabsado Waxaan rabaa inaan iibsado guri Waxaan rabaa macluumaad
Villas guryaha Dhulalka
Villas raaxo leh
Dhul leh mashruuc